Buluugleey Somali Information Servcie
Xubno ka socda Caalamaka deqda bixiya ayaa
la filayaa inay Muqdisho yimaadaan
Buluugleey, April 26, 2005
Xubno ka socda Wakiilada Beesha Caalamka ayaa la filayaa inay dhawaan yimaadaan Magaalada Muqdisho. Wakiilada Beesha caalamka oo fadhigooda yahay Nairobi ee dalka Kenya ayaa la sheegaya inay rabaan inay la kulamaan xubnahan barlamaanka ee ku sugan magala madaxda Muqdisho, kadibna sidii ay ugu soo celin lahaayeen dalka Kenya.
Xiriir teleefon oo dhex maray xubnaha Labada gole ee Muqdisho ku sugan iyo Wakiilada Beesha Caalamka ee Nairobi ku sugan ayaa miri dhal noqonin,iyadoo xubnaha muqdisho ku adkeysteen inaysan ku laaban doonin Nairobi ilaa iyo inta ammaanka magaalada muqdisho wax laga bedelayo.
Ku xigeenka Ra’iisal Wasaaraha Soomaaliya ahna Wasiirka Warfaafinta Maxamuud C/llaahi Jaamaca “Sifir”ayaa u qaabilsanaa xubnaha xamar jooga xiriirka dibadda ayaa isagu la sheegay in teleefonka kula hadlay xubnaha beesha Caalamka.
Xubanaha barlamaanka ay ku sugan Muqdisho waxay dhawaan dar-dar cusub geliyeen sidii loo sugi lahaa nabadda gobolka Banaadir. In kastoo ay jiraan caqabado la xiriiro fikrado kala gedisan ee ka imaanaya qaar ka tirsan horjoogayaalka gobolka Banaadir isane waxay madaxda dowlada ku tala jiraan inay ka mira dhaliyaan khorsha nabadeynta ay ku soo talagaleen.